စစ်ကောင်စီရဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကရပ်စဲမှု NUG ဝန်ကြီးတွေလက်မခံ
ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က အွန်လိုင်းကကျင်းပတဲ့ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း ၇၅ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား တက်ရောက်သူအချို့။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၂၂။ ပုံ - Screenshot from NUG Facebook)
မြန်မာစစ်ကောင်စီက NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဝန်ကြီး၇ ဦး၊ ဒုဝန်ကြီးနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်တာဟာ တရားမဝင်သလို လက်ခံမှာလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ NUG ဝန်ကြီးတွေက တုန့်ပြန်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုဝင်းမင်းက ပြောပြပေးမှာပါ။
NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး အပါအဝင် ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဝန်ကြီး ၇ ဦးနဲ့ ဒုဝန်ကြီးတွေ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ကို မြန်မာစစ်ကောင်စီက နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲလိုက်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံသားအဖြစ်က ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာလိုက်တာဟာ တရားမဝင်ဘူးလို့ NUG အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးက ထောက်ပြဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုဝင်းမင်း က အကြောင်းစုံကို ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့ မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ NUG ရဲ့ အဓိကဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပညာ၊ကျန်းမာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရီမွန် နဲ့ ပြည်ထဲရေး လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးလွင်ကိုလတ် ၊ သတင်းနည်းပညာဝန်ကြီး ဦးထင်လင်းအောင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဆာဆာ တို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ်က ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာလိုက်တာပါ။ ဒါအပြင် ရဲ့ NUG အမျိုးသမီး နဲ့ လူငယ်၊ ကလေးရေးရာ ဒုဝန်ကြီးအိသဉ္ဇာ မောင် ၊ ၈၈ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်၊တက်ကြွလှုပ်ရှာသူ ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်း နဲ့ အိပန်ဆယ်လို တို့ကိုလည်း နိုင်ငံသားအဖြစ်ရပ်စဲခံရတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ ပြည်ပကို တရားမဝင်ထွက်သွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တာကြောင့် အခုလို နိုင်ငံသားအဖြစ်ရပ်စဲ ခဲ့ရတာလို့ စစ်ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာအပေါ် ထူးခြားမှုကို မေးရာမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်း က.
ဦအောင်မျိုးမင်း ( NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး ) ။. ။ အခု နိုင်ငံသားအဖြစ်ရပ်စဲတာကတော့ အရင်တုံးက နာမည်တပ်တာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုံးက နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အဖြစ်ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။ အလိုလို နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ ပယ်ဖျက်လိုက်တာပေါ့နော်။ အခုလို လူသိရှင်ကြားနာမည်တပ်လုပ်ဆောင်တာကတော့ နည်းနည်းထူးခြားတယ်။ တဖက်ကလည်း အဲဒီလူတွေလုပ်ဆောင်မှုကို သူတို့အနေနဲ့ စိုးရိမ်တာရှိတယ်။ တုံလှုပ်တာရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကြောက်ရွံပြီးတော့ လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးလွင်ကိုလတ် က ။
ဦးလွင်ကိုလတ် (NUG ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ) ။. ။ လွှတ်တော်ကနေ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကျနော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့ဟာ အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ နိုင်ငံတကာရောက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အင်အားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ သူတွေထဲမှာဆိုရင် လောလောဆယ်မှာ ပြည်ပရောက်နေကြတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အရလုပ်နေကြတာရှိတယ်။ ဒါက အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ ရှာကြံပြီးတော့ တိုက်ခိုက်လိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် ဦးအောင်မျိုးမင်း ကလည်း စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အခုလို လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။
ဦအောင်မျိုးမင်း ( NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး ) ။. ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ပယ်ဖျက်တာ၊ မပယ်ဖျက်ဘူးဆိုတာက နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သမ္မတ က ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာက သမ္မတ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း မပါဘူး။ စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဝင်မှုလည်းမရှိဘူး။ အသိအမှတ်လည်းမပြုပါဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သူတို့တားဆီးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ တာဝန်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့စိတ်ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ သွေယိုင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဆာဆာ ကလည်း ..
ဒေါက်တာ ဆာဆာ (NUG အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး) ။. ။ တခြားနိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ကျနော်တို့မှာ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့က ဒီအခွင့်အရေးကို မယူပဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ထာဝရဂုဏ်ယူပြီးတော့ နိုင်ငံသားအဖြစ်က ရပ်စဲပိုင်ခွင့်မရှိသလို ထိခိုက်နစ်နာတာ တခုမှလည်းမရှိပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် ၁၉ ၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအရလုပ်တာပါလို့ စစ်ကောင်စီဖက်က ပြောသော်လည်း ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးလွင်ကိုလတ် က ..
ဦးလွင်ကိုလတ် (NUG ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ) ။. ။ ဒီ ၁၉ ၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုးကားခဲ့တာတွေရှိတယ်။ တကယ်တန်း အဲဒီ ဥပဒေကိုယ်တိုင်ကိုယ်က အများကြီး ပြင်ဆင်ရအုန်းမယ် ဥပဒေတခုဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေစွဲတယ်ဆိုတာကိုတိုင်က ကျနော်တို့က နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်ဖို့ တော်လှန်ရေးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုမသက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ကိုးကားနေတာကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပြည်သူကတင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကို ကျအောင်ကြိုးစားမှုတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စစ်ကောင်စီ ကို ပြည်သူတရပ်လုံးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့် အရာထင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားလက်မှတ်သိမ်းဆည်းခဲ့တာတို့၊ နေအိမ်ချိတ်ပိတ်တာတို့ အခုနိုင်ငံသားအဖြစ်က ရပ်စဲတာလုပ်ခဲ့တာတွေဟာ နောက်ထပ်လည်း ဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
စဈကောငျစီရဲ့ နိုငျငံသားအဖွဈကရပျစဲမှု NUG ဝနျကွီးတှလေကျမခံ
NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ ဒေါကျတာဇျောဝစေိုး အပါအဝငျ ကာကှယျရေး၊ ပွညျထဲရေးနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးတှနေဲ့ ဝနျကွီး ၇ ဦးနဲ့ ဒုဝနျကွီးတှေ တကျကွှလှုပျရှားသူတခြို့ကို မွနျမာစဈကောငျစီက နိုငျငံသားအဖွဈကနေ ရပျစဲလိုကျပါတယျ။ စဈကောငျစီက နိုငျငံသားအဖွဈက ရပျစဲကွောငျး ကွညောလိုကျတာဟာ တရားမဝငျဘူးလို့ NUG အစိုးရရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးဝနျကွီးက ထောကျပွဝဖေနျလိုကျပါတယျ။ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတဲ့ ကိုဝငျးမငျး က အကွောငျးစုံကို ပွောပွပေးမှာဖွဈပါတယျခငျဗြာ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့ မွနျမာစဈကောငျစီအနနေဲ့ NUG ရဲ့ အဓိကဝနျကွီးတှဖွေဈကွတဲ့ ပညာ၊ကနျြးမာဝနျကွီး ဒေါကျတာဇျောဝစေိုး၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး ဦးရီမှနျ နဲ့ ပွညျထဲရေး လူဝနျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး ဦးလှငျကိုလတျ ၊ သတငျးနညျးပညာဝနျကွီး ဦးထငျလငျးအောငျ ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဒျေါဇငျမာအောငျ ၊ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာဝနျကွီး ဦးအောငျမြိုးမငျး နဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာ ဆာဆာ တို့ကို နိုငျငံသားအဖွဈက ရပျစဲကွောငျး ကွညောလိုကျတာပါ။ ဒါအပွငျ ရဲ့ NUG အမြိုးသမီး နဲ့ လူငယျ၊ ကလေးရေးရာ ဒုဝနျကွီးအိသဉ်ဇာ မောငျ ၊ ၈၈ ခေါငျးဆောငျတဦးဖွဈတဲ့ ဦးမငျးကိုနိုငျ၊တကျကွှလှုပျရှာသူ ဦးမြိုးရနျနောငျသိမျး နဲ့ အိပနျဆယျလို တို့ကိုလညျး နိုငျငံသားအဖွဈရပျစဲခံရတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယျ။ ပွညျပကို တရားမဝငျထှကျသှားပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့အကြိုးကို ထိခိုကျအောငျလုပျတာကွောငျ့ အခုလို နိုငျငံသားအဖွဈရပျစဲ ခဲ့ရတာလို့ စဈကောငျစီက ထုတျပွနျခဲ့တာအပျေါ ထူးခွားမှုကို မေးရာမှာ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာဝနျကွီး ဦးအောငျမြိုးမငျး က.
ဦအောငျမြိုးမငျး ( NUG လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာဝနျကွီး ) ။. ။ အခု နိုငျငံသားအဖွဈရပျစဲတာကတော့ အရငျတုံးက နာမညျတပျတာမရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီတုံးက နိုငျငံသားမှတျပုံတငျအဖွဈကို ပွနျပွောငျးလိုကျတယျ။ အလိုလို နိုငျငံသားအဖွဈကနေ ပယျဖကျြလိုကျတာပေါ့နျော။ အခုလို လူသိရှငျကွားနာမညျတပျလုပျဆောငျတာကတော့ နညျးနညျးထူးခွားတယျ။ တဖကျကလညျး အဲဒီလူတှလေုပျဆောငျမှုကို သူတို့အနနေဲ့ စိုးရိမျတာရှိတယျ။ တုံလှုပျတာရှိတယျ။ နိုငျငံတကာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ လုပျဆောငျမှုတှကေို ကွောကျရှံပွီးတော့ လုပျတာဖွဈပါတယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ ဘယျလိုရညျရှယျခကျြနဲ့ လုပျဆောငျတာဖွဈနိုငျပါလဲလို့ ပွညျထဲရေးနဲ့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး ဦးလှငျကိုလတျ က ။
ဦးလှငျကိုလတျ (NUG ပွညျထဲရေးနဲ့ လူဝနျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး ) ။. ။ လှတျတျောကနေ ရှေးကောကျတငျမွှောကျထားတဲ့ ကနြျောတို့ အစိုးရအဖှဲ့ဟာ အနာဂတျဖကျဒရယျနိုငျငံကို တညျဆောကျဖို့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိနဲ့ နိုငျငံတကာရောကျနကွေတဲ့ နိုငျငံသားတှရေဲ့ အငျအားတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပါဝငျနကွေတယျ။ ဒါကွောငျ့ကနြျောတို့အစိုးရအဖှဲ့မှာ ပါဝငျနကွေတဲ့ သူတှထေဲမှာဆိုရငျ လောလောဆယျမှာ ပွညျပရောကျနကွေတဲ့သူတှနေိုငျငံရေးလိုအပျခကျြအရလုပျနကွေတာရှိတယျ။ ဒါက အစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဥပဒကွေောငျးအရ ရှာကွံပွီးတော့ တိုကျခိုကျလိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ဆောငျရှကျနတေယျလို့ပဲမွငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ ဦးအောငျမြိုးမငျး ကလညျး စဈကောငျစီအနနေဲ့ အခုလို လုပျပိုငျခှငျ့မရှိဘူးလို့ ကနျ့ကှကျလိုကျပါတယျ။
ဦအောငျမြိုးမငျး ( NUG လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာဝနျကွီး ) ။. ။ နိုငျငံသားအဖွဈ ပယျဖကျြတာ၊ မပယျဖကျြဘူးဆိုတာက နိုငျငံမှာရှိတဲ့ သမ်မတ က ဆုံးဖွတျရမယျ့အရာဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာက သမ်မတ ဆုံးဖွတျခကျြလညျး မပါဘူး။ စဈအာဏာသိမျးထားတဲ့ အကွမျးဖကျတပျဖှဲ့ဖွဈတဲ့အတှကျ တရားဝငျမှုလညျးမရှိဘူး။ အသိအမှတျလညျးမပွုပါဘူး။ ကနြျောတို့ရဲ့ နိုငျငံသားဖွဈမှုနဲ့ နိုငျငံခဈြတဲ့စိတျကို ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ သူတို့တားဆီးနိုငျမှာ မဟုတျဘူး။ မွနျမာနိုငျငံသားတှရေဲ့ တာဝနျအတိုငျး မွနျမာနိုငျငံကောငျးဖို့လုပျဆောငျတဲ့စိတျကိုတော့ ဘယျလိုမှ သှယေိုငျသှားမှာမဟုတျပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာ ဆာဆာ ကလညျး ..
ဒေါကျတာ ဆာဆာ (NUG အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးဝနျကွီး) ။. ။ တခွားနိုငျငံသားဖွဈနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး ကနြျောတို့မှာ အမြားကွီးရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကနြျောတို့က ဒီအခှငျ့အရေးကို မယူပဲနဲ့ မွနျမာနိုငျငံသူ နိုငျငံသားဖွဈရတာ ထာဝရဂုဏျယူပွီးတော့ နိုငျငံသားအဖွဈက ရပျစဲပိုငျခှငျ့မရှိသလို ထိခိုကျနဈနာတာ တခုမှလညျးမရှိပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ ၁၉ ၈၂ မွနျမာနိုငျငံသား ဥပဒအေရလုပျတာပါလို့ စဈကောငျစီဖကျက ပွောသျောလညျး ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီး ဦးလှငျကိုလတျ က ..
ဦးလှငျကိုလတျ (NUG ပွညျထဲရေးနဲ့ လူဝနျမှုကွီးကွပျရေးဝနျကွီး ) ။. ။ ဒီ ၁၉ ၈၂ နိုငျငံသား ဥပဒနေဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုးကားခဲ့တာတှရှေိတယျ။ တကယျတနျး အဲဒီ ဥပဒကေိုယျတိုငျကိုယျက အမြားကွီး ပွငျဆငျရအုနျးမယျ ဥပဒတေခုဖွဈတယျ။ ဒီဥပဒစှေဲတယျဆိုတာကိုတိုငျက ကနြျောတို့က နိုငျငံသဈတညျဆောကျဖို့ တျောလှနျရေးလုပျတာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီလိုမသကျဆိုငျတဲ့ ဥပဒတှေကေို ကိုးကားနတောကတော့ အဓိပ်ပါယျမရှိဘူးပေါ့နျော။ ဒါကွောငျ့ ပုံသဏ်ဍာနျမြိုးစုံနဲ့ပွညျသူကတငျမွှောကျထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ပုံရိပျကို ကအြောငျကွိုးစားမှုတခုပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ စဈကောငျစီ ကို ပွညျသူတရပျလုံးလကျမခံတဲ့အတှကျကွောငျ့ အရာထငျစရာအကွောငျးမရှိပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ နိုငျငံခွားခရီးသှားလကျမှတျသိမျးဆညျးခဲ့တာတို့၊ နအေိမျခြိတျပိတျတာတို့ အခုနိုငျငံသားအဖွဈက ရပျစဲတာလုပျခဲ့တာတှဟော နောကျထပျလညျး ဆကျလကျဖျောထုတျသှားမယျလို့ ထုတျပွနျထားပါတယျခငျဗြာ။
NUG ဝန်ကြီးတွေအပါအဝင် ၁၁ ဦးကို နိုင်ငံသားအဖြစ်က ရပ်စဲကြောင်း စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်